Ukubhabha kukaMatthew Roberts kubonisa indawo yokugcina eApple Park | Ndisuka mac
Sinabaqhubi beenqwelo moya abangakumbi nangaphezulu ababhabha ngaphezulu kweApple Park kwaye omnye wamagqala kwezi nqwelomoya kunye nevidiyo nguMatthew Roberts. Kule meko sijongane nevidiyo ye4k esinikwa nguRoberts kwaye apho unakho bona ezinye zeyona nkcukacha zinomtsalane kwindawo ebiyelweyo esele ihambile kakhulu. Ukongeza kwindandatho, iigaraji, indawo yokuzivocavoca okanye igumbi apho yonke imiboniso iya kwenziwa xa igqityiwe, i-Steve Jobs Auditorium, sifumana kwividiyo ezinye izakhiwo ezazingazange zibonwe ukuza kuthi ga ngoku njengendawo yokugcina ekhethekileyo apho amisa khona idrone yakhe uRoberts.
Le yividiyo yokugqibela ethathwe ngumqhubi wenqwelomoya u-Roberts, apho ungabona khona zonke izakhiwo ezintsonkothileyo kunye nesi sakhiwo sinomdla wokwakha ubume baseMelika. Sishiya ividiyo ukuze uyibone:
Ngaphandle kwamathandabuzo, iiofisi eziphambili zibonakala zisebenza ngokupheleleyo kwaye kunokwenzeka ukuba ukusukela ngo-Epreli abanye babasebenzi benkampani yeCupertino sele besebenza kuzo, ezinye izakhiwo ziyaqhubeka ngesantya esihle sokwakha kwaye kunokwenzeka ukuba kwiinyanga ezimbalwa baya kuyigqiba. Ngokubhekisele kwangaphakathi, kunokwenzeka ukuba iApple ityhile idatha ethile kumxholo ophambili olandelayo okanye isibonise neenkcukacha zesakhiwo okanye inkqubela yaso ngokusesikweni, kuba rhoqo sihlala sineevidiyo ezisemoyeni ezisivuselela kwindawo leyo zilunge ngakumbi kuneefoto zangaphandle ezimbalwa ezipapashiweyo ezivela kuApple uqobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ukubhabha kukaMatthew Roberts kubonisa indawo yokugcina eApple Park
U-Apple uqeshe u-Esin Terzioglu, usekela-mongameli weQualcomm